Biyyoota Arabaa addaan qoqqooduuf karoorri 1982 kaayame hujiirra oolaa jiraachuu isaa Burqaan Oduu Addunyaa Montikaarlo ibsee jira. | Oromia Shall be Free
bilisummaa July 27, 2015	Comments Off on Biyyoota Arabaa addaan qoqqooduuf karoorri 1982 kaayame hujiirra oolaa jiraachuu isaa Burqaan Oduu Addunyaa Montikaarlo ibsee jira.
Akka ibsa burqaa Oduu addunyaa Montikaarlo kanatti biyyi araba shan jechuun Iraaq Suriyaa Libiyaa Sudaani Yaman bakka 14tti kan addaan ciccituuf jiraatan tahuu burqaan oduu kuni ibsee jira.
Tags Arab Araba Biyya
Previous Obamaa fi biyya teenya.
Next Sababa daawwii Obaamaatiin Jiraattonni Finfinnee jeeqamaa jiru.